कस्तो हो भारतीय क्रिकेट टिममाथि वेस्ट इन्डिजमा आक्रमणको धम्की? - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो हो भारतीय क्रिकेट टिममाथि वेस्ट इन्डिजमा आक्रमणको धम्की?
काठमाडौंः वेस्ट इन्डिजमा भारतीय क्रिकेट टोलीमाथि आक्रमणको धम्कीलाई बिसिसिआईले फर्जी भनेको छ ।
पाकिस्तानको टेलिभिजन च्यानेल जियो टिभीले आइतबार वेस्ट इन्डिज भ्रमणमा रहेको भारतीय क्रिकेट टीममाथि आक्रमण हुनसक्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
जियो टिभीका अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड- पिसिबीलाई पठाइएको धम्कीपूर्ण इमेलमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको थियो । पिसिबीले उक्त इमेलबारे आइसीसीलाई जानकारी गराएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा एकै दिन ६ हजार बढीमा कोरोना संक्रमण, कुन देशको अवस्था कस्तो? (सूचीसहित)
आइसीसी र वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले यस अघि नै उक्त इमेल आधिकारिक नभएको भन्दै आक्रमणको सम्भावनालाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।
भारतीय टोलीले वेस्टइन्डिजविरुद्ध एक दिवसीय र टी-२० खेलिसकेको छ । अगस्ट २२ देखि दुई टीमबीच दुई टेस्ट खेलको शृंखला हुनेछ । हाल वेस्ट इन्डिज-ए टीमसँग अभ्यास खेल खेलिरहेका भारतीय खेलाडीहरूको सुरक्षा समेत बढाइएको छैन ।
बीसीसीआईका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत पीटीआईले उक्त धम्कीबारे सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई जानकारी दिइएको र जाँचमा त्यसलाई फर्जी पाइएको जानकारी दिएको छ ।
बीसिसीआईले खेलाडीहरूको सुरक्षाका लागि सबै कदम उठाइने र त्यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने बताएको छ । उसले आइसीसीले पनि खेलाडीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको बताएको छ ।
ट्याग्स: आइसीसी, क्रिकेट, भारत, विराट कोहली